﻿ रुख काटिँदा मन दुःखेको छ, तर गर्ने के ?
रुख काटिँदा मन दुःखेको छ, तर गर्ने के ?
- लक्ष्मी गौतम
शनिबार २१, बैशाख २०७६
यो सडक अधिकार क्षेत्र संघीय सरकार को हो । रुख काट्न थाल्नु अगाडि स्थानिय सरकार इटहरी उपमहानगरपालिका सङ कुनै समन्वय भएन यदि समन्वय भएको भए समयमा बिकल्पबारे सल्लाह हुने थियो होला ।
सन्दर्भ : सडकक्षेत्र का रुख कटान
सडक निर्माणको कामको सन्दर्भले इटहरी चोकका रुख काटियो काट्तै गरेको थाहा पाएर हेर्न गए सारै मन दु:ख्यो तर मैले हेर्न बाहेक केही गर्न सक्दिन थिए ।
'मेयर सा'ब धरान लाइनका सबै रुख त काटेछ सोतर पारेर बिरक्त लाग्दो दृस्य छ चोक को' भनेर फोन गरे
'हो र ?' भन्नू भो अलि मेरोभन्दा मेयर सा'बको घर अलि पर भएकोले थाहा पाउनु भएको थिएन र स्वभाविक हो !
सोध्नु भो, 'सबै काटेछ ?'
थपे, 'धरान लाइन सकेछ,' अनि भने, 'मेयर सा'ब बाकी रहेकालाई कतै सार्न सकिन्छ कि ?' भन्नू भो, 'सल्लाह गरौ, बाताबरण साखासँग थप आइडिया होला ।'
बाकी रहेकालाई के गर्न सकिन्छ सल्लाह हुँदैछ ।
आज दिनभर मेरो मनमा उब्जिएका प्रश्न :
सार्न मिले पनि कसरी होला ? संघीय सरकारको काम हुँदै गरेको योजनामा हामीले रुख सार्ने काम गर्दा खर्च गर्ने विधि के ? डुब्लिकेसन हुँदा लेखाले के भन्ला ? आर्थिक बर्षको अन्तिम चौमासिकमा छौँ, सम्झौता भएका योजना भुक्तानी गर्नु पर्छ । निकै खर्च होला । कुनै शीर्षकमा पैसा छैन । अनि अख्तियार आतंक पनि मनमा छ, केही नगरे नि बयान दिन जानूपर्छ । यिनै अनुत्तरित प्रश्न मनमा दिनभर आइरह्यो । काममा ब्यस्त भइयो । वातावरण शाखालाई बाँकी रहेका रुख सार्ने बारेमा के हुन्छ ? राय पेस गर्न भनेको छ ।
रुख काटेको उपमहानगरपालिकाले होइन सबै जनतालाई थाहा नहुन सक्छ तर थाहा हुनेहरुले नि हामिलाइ गाली गलोज गरेको पाइयो संघीयताको सिस्टम सबैलाई थाहा हुन्न पनि थाहा हुनेहरु थाहा नहुने जनतालाई सुसुचित गर्ने दायित्व हजुरहरुको पनि हो । सबैले थाहा पाउँदा उपमहानगरले थाहा पाएन रे भन्नेर मलाइ भन्न सक्नु हुन्छ ।
गाली गर्ने पनि तपाईंलाइ हक छ तर तपाईंले आफ्नो हक प्रयोग गरिरहदा अन्जान जनताले वास्तविक कुरा कसरी बुझ्ने होला ? एक पार्टीका केन्द्रीय नेताले सिमेन्टको मात्र सहर बन्ने भो इटहरी भनेर लेख्नु भाको थियो ।
नेता जि, तपाईंलाई थाहा छ निषेधको निषेध नियम नभुल्नुस । मकै पिस्ता घुन पिसियो । नभत्काइ पुन निर्मान हुन्न रहेछ । हामिलाइ पनि मन दु:खेको छ हेर्दा । रहेकालाई सार्ने उपाय र कोसिस हुनेछ । सडक निर्माण को काम सकेपछी हामी रोप्नेछौ आफै नर्सरी लगाएर बिरुवा हुर्काएकाछौ । सार्न सकेको भए धेरै राम्रो हुनेथियो यो राय दिनुहुनेप्रती सहमत छु । हामी जनप्रतिनिधी इमान्दार पुर्बक इटहरीको निर्माणमा छौ ।
(गौतम इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर हुन् । कोशी राजमार्ग फराकिलो पार्ने क्रममा इटहरी चोकका रुखहरु काटिएपछि इटहरीवासीले विरोध जनाएका थिए । रुखलाई सार्न सकिने विकल्प सोच्दै नसोची काटिएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । उपमहानगरपालिका केन्द्रित आलोचना बढ्दै गएपछि गौतमले रुख कटान आफूहरुले नगरेको, रोक्ने अधिकार पनि आफूहरुसँग नरहेको र सार्नको लागि लाग्ने खर्चको व्यवस्थापन गर्न समस्या रहेको जस्ता कारणहरु खोलेर फेसबुकमार्फत् दिएको स्पष्टिकरण यहाँ राखिएको हो । –सम्पादक)
दिनदिनै उजाडिँदै इटहरी चोक, नरहने भयो हरित नगरी (फोटोफिचरसहित)
मौसमी राष्ट्रवाद त्यागेर भूमी रक्षामा केन्द्रित बनौं
नेपाली सेना साँच्चिकै कमजोर हो या बनाइदैछ ?
‘फिर्तालीला’ को सिंहावलोकन